यदि भविष्यवाणीहरू पूरा भएमा, के तपाईंको धारणा सत्य हुन् कि त्यो प्रमाण हो? मार्टिन भिजल्याण्ड
धेरै पाठकहरूले भविष्यवाणीहरूको पूर्ति देखाउँछन् कि उनीहरूको विश्वास सही छ भन्ने संकेतको रूपमा। ती व्यक्तिहरूका लागि धर्ममा रुचि छैन, म भन्न चाहन्छु: फेरि सोच्नुहोस्, किनकी सारा विश्व राजनीति धार्मिक विश्वासहरूमा आधारित छ। यदि तपाइँ त्यो देख्नुभएन भने, तपाईले मात्र ध्यान दिनुभएन। किन इस्राएलको राज्य स्थापना भयो, किन धेरै यहूदीहरू प्यालेस्टाइनमा गएका थिए, किन ट्रम्पले यरूशलेमको इस्राएलको राजधानी यरूशलेमको घोषणा गरे र उनले किन गोल गरेका हाइट्स इजरायलका हुन्? धार्मिक कारणहरु र केहि पनि छैन। धार्मिक प्रेरणाहरू विश्वभरका सबै प्रमुख राजनैतिक आन्दोलनहरूमा हस्तक्षेप गर्दैछन्।
यदि केहि केहि ठूलो प्रक्रियाहरुमा सामान्य थ्रेड बनाइन्छ भने, तपाईं वास्तव मा होशियार भएन यदि तपाई यो सामान्य थ्रेड देख्न चाहानुहुन्छ वा यसलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन। धर्म यो कुरा हो जुन हामीले गम्भीर ध्यान दिनु पर्छ, किनकि यो विश्व राजनीतिको मार्गदर्शक कारक हो। यसले सबै राजनीतिक प्रक्रियाहरूको कोर्टा बनाउँछ जुन हामी हरेक दिन हाम्रो वरपर देख्न सक्छौं। तपाईंले आफैलाई निर्णय गर्नुभएको हुन सक्छ कि तपाईं धार्मिक वा धार्मिक चाहानुहुन्छ, तर विश्व स्तरमा धर्मको महत्त्वलाई इन्कार गर्नु भनेको इन्कार गर्नु जस्तै केहि हो कि पृथ्वीको 70 पानीसँग ढाकिएको छ।
त्यसैले यदि तपाईंले रेडबाट आफ्नो टाउकोमा विश्व राजनीतिमा धर्मको महत्त्वपूर्ण प्रभावको बारेमा लिनुभएको छ, त्यसोभए हामी यो देख्न सक्छौं कि यो भूमिका हो। यदि तपाईं साँच्चै यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले धेरै साथीहरू, छिमेकीहरू वा परिचितहरू भविष्यवाणीको मूल्य पाउन सक्नुहुनेछ; जुनसुकै विश्वासहरू तिनीहरू छन्। यसको अर्थ हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि मानिसहरू दृढतापूर्वक विश्वस्त छन् कि यी भविष्यवाणीहरू पहिले नै आइपुगेका छन् वा सत्यमा आउनेछन्। त्यसैले यदि अरबौं मानिसहरू जस्तै केहि मा विश्वास गर्छन् भने, तपाईंलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्छ, किनकि यदि तपाईं छैन भने, तपाईं केवल अल्पसंख्यक हो। अरबौं मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि एक मसीह हुनेछ, कि त्यहाँ एक विरोधी हुनेछ, र त्यहाँ यरूशलेमको अन्त-समय युद्ध हुनेछ। केवल जान्दछन् कि तपाईं किन बुझ्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि, यरूशलेम यति धेरै राजनीतिक आन्दोलनहरूको एजेन्डामा महत्त्वपूर्ण छ। यो अर्को मुद्दा हो यदि तपाईं ती मामिलाहरूमा पार गर्न समय नदिनु हुन्न किनभने तपाईं बाहिर जाने, काम गर्दै, बिल भुक्तानी, रोटी र खेलहरू, र यति संलग्न गर्न चाहानुहुन्छ। मेरो विचारमा यो सार्थक छ (वा सोही: अनिवार्य) यी चीजहरूमा पार गर्न। किन? त्यसोभए तपाईं जान्नुहुन्छ के गरिरहेको छ र 'यो जाँदैछ'।
मैले ईसाई र इस्लामिक पक्ष दुवैबाट धेरै प्रतिक्रियाहरू पाएको छु कि केही घटनाहरूले उनीहरूका भविष्यवाणीहरूको पूर्तिको प्रमाण हुन्। प्रश्न म यी मान्छेलाई सोध्न चाहन्छु निम्न हो: यो तथ्य भनेको के हो कि त्यहाँ अण्डा पहिलो चोटि एक चिकन हिडिरहेको छ? तपाईंले त्यो अजीब प्रश्न फेला पार्न सक्नुहुनेछ, तर के मैले मतलब भनेको हो कि भविष्यवाणीहरू सत्य हुन् भन्ने निश्चित गर्दैन कि तपाईंको धर्म सत्य हो। सम्भवतः ती पाठकहरू आफैलाई आफैलाई सोध्नुपर्छ कि तिनीहरू तिनीहरू बचाउबाट के साथ ल्याईएका छन् को प्रमाण खोज्दैनन् कि छैन। म पनि ईसाई कुत्तों संग उठाया छ, तर यदि तपाईंसँग वास्तव मा आफ्नो बक्से बाहिर सोचने को लागि गट्स हो, तपाईं आफ्नो पूर्व निर्मित निर्मित बुलबुले मा फंसने नहीं हुनेछ। तपाईंको ईसाई बुलबुला छोड्ने डर वा तपाईंको इस्लामी बुलबुला भन्दा बाहिरको डरले नरकको सजावटको डर र पछिल्ला जीवनमा भव्य पुरस्कार गुमाएको छ। म माफी माग्छु, तर सबैलाई जसले ती आधारभूत ढाँचाहरू बाहिर कहिल्यै सोच्न साहस गर्दैन, मेरो विचारमा, डराउँदैनन्।
जब भविष्यवाणीहरू सत्य हुन्छन्, धेरैले तिनीहरूको विश्वासको प्रमाण देख्छन्। उदाहरणका लागि, क्लिक गर्नुहोस् यो लिङ्क यहोवाका साक्षीहरूले केही घटनाहरू कसरी हेर्छन् भनी भविष्यवाणीहरू पूरा भएको छ भनेर हेर्नुहोस्। तल यो लिङ्क तपाईं ख्रीष्टियन दर्शनमा सत्य भविष्यवाणी गर्नुहुने भविष्यवाणी को एक छोटो सारांश पाउनेछ; उल्लेख गरिएको छ कि तपाईं फेरि सबै प्रकारका 'क्रान्तिको आन्दोलन' बीचको भिन्नता छ। इभान्जीलिक वा बप्टिस्ट आन्दोलन एक पटक फेरि संशोधित मसीहीहरूको तुलनामा घटनाक्रमको समयरेखामा फरक फरक लाग्छ र यसैले बाइबल व्याख्यामा भिन्नतामा आधारित विचारहरूमा मतभेदहरूको सम्पूर्ण सूची बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी इस्लामिक पक्षमा समान छौं र यसैले तपाई वास्तवमा सबै प्रमुख विश्व धर्महरूमा संगत र विवादित विचारहरू देख्नुहुन्छ। त्यसपछि इस्लाम, यहूदी धर्म र ईसाई धर्मको बीचमा धेरै समानताहरू छन्। म यहाँ अर्को प्रमुख विश्व धर्महरू छोड्दछु, तर सिद्धान्तमा हामी समान आधारभूत सिद्धान्तहरू फरक तरिकामा देख्छौँ। तथापि, तीनवटा उल्लेख गरिएका सबै अब्राहामिक विश्वास प्रणालीहरू हुन्। तथापि, मुसलमानहरूले विश्वास गर्छन् कि तिनीहरूको विश्वास ईसाई धर्मको सही छ, र मसीहीहरूले विश्वास गर्छन् कि इस्लामले झूटा अगमवक्ताको विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
धेरै छोटो कुरा, यो इस्लाम र ईसाई धर्मको बीचमा महत्वपूर्ण मतभेदहरू हुन् (जहाँ तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि ईसाई धर्म यहूदी धर्मसँग जोडिएको छ, किनकि यो यहूदी विश्वास ख्रीष्टको अन्त्य-समय योजनाको भाग हो):
इस्लाम को कुरान र सुन्न (हदीस) को आधार मा विश्वास गर्दछ:
महदीको आगमनमा ("प्रतिज्ञा गरिएको एक", "शान्ति ल्याउने" वा "दिवाहवाहम इमम" वा "लुकेको इमम"।)
यशैयाको आगमनमा (यशैया 'येशू' को लागि अरबी हो।)
Dajjal को आगमन मा। "ठूलो धोखाधडी जो एक घाँटीमा आउनेछ।"
मसीहीहरू बाइबलको आधारमा विश्वास गर्छन्:
"झूटा अगमवक्ता" आउनु भएको
येशू ख्रीष्टको आगमनमा, जसले नयाँ विश्व साम्राज्य स्थापित गर्नेछ।
दुबै धर्महरू येशूको पुनरुत्थानमा विश्वास गर्छन् र पनि दुवै विरोधी विरोधीको आगमनमा विश्वास गर्छन्; जसले इस्लाममा दजल भनिन्छ। उदाहरणको लागि एक लिनुहोस् यो चलचित्र यो विचार प्राप्त गर्न।
मेरो लेखको माध्यमले के गर्ने प्रयास गर्दैछु भन्ने पाठकलाई प्रोत्साहन दिनको लागि सोच्न वा भविष्यवाणी कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि एक ठूलो लिपि हो भन्ने संकेत होइन। विभिन्न धर्मका विश्वासीहरू सँगसँगै जान चाहन्छन्। यद्यपि, त्यसपछि तिनीहरू निश्चित गर्नुहोस् कि स्क्रिप्ट तिनीहरूको ईश्वरद्वारा नियन्त्रित छ; या त बाइबल या अल्लाह को ईश्वर (इस्लाम को मामला मा)। यद्यपि, म पाठकहरूलाई विचार गर्न प्रोत्साहन दिन चाहान्छु कि हामी स्क्रिप्ट साक्षी देख्ने सरल तथ्यले संकेत गर्दैन कि सम्पूर्ण कार्यक्रम पूर्व-प्रोग्राम गरिएको छ र हामी एक सिमुलेशन सच्चाईमा बसिरहेका छौं (एक सिमुलेशनमा)। यो हुन सक्छ कि भविष्यवाणीहरु बाहिर आउनु मात्र सजिलै संग संकेत छैन कि तपाईंको विशिष्ट ईश्वर एकमात्र सत्य हो, तर विशेष गरी यो एक 'भगवान' हुनु पर्दछ? यो हुन सक्छ कि यो ईश्वरले यस कुरालाई सजिलै लिपिबद्ध बनाएको छ कि बहुसंख्यक प्लसहरू र प्लस र माइनस पोलहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ जुन यो अन्त-टाइम युद्ध पूरा गर्न सकिन्छ? यो हुन सक्छ कि स्क्रिप्ट यस्तो तरिकाले बनाइयो कि समाज दुबैवादलाई सधैं 1 दिशामा ड्राइव गर्न आवश्यक छ (जस्तै एक ब्याट्रिबाट सीधा वर्तमान एक सकारात्मक र नकारात्मक पोल संग)? के यो हुन सक्छ कि धार्मिक धार्मिक बोझ जुन तपाईले आफ्नो पवित्र पुस्तकबाट तपाईको विश्वास प्रणाली खोज्नु भएको छ भने तपाईलाई यी एक विरोधीको भाग बनाउन आवश्यक छ?
यदि क्वांटम भौतिकीले पहिले नै देखाउँछ कि एक पर्यवेक्षक आवश्यक छ र यदि क्वांटम भौतिकी खोजहरु लाई संकेत गर्दछ कि एक पर्यवेक्षक को भौतिक संसार बनाउन को लागी आवश्यक छ, तब, उन धार्मिक भविष्यवाणीहरु संग एक साथ एक संकेत छैन कि हामी वास्तव मा एक अनुकरण जीवन? मैले यस बारे एक विस्तृत लेख श्रृंखला लेखे यहाँ en यहाँ फेला पर्यो। यो ठीक छ कि व्याकरण मोडेल बाट एक देवता को समझाने को लागि ठीक छ। यो अर्थात् यो सिमुलेशनको बिल्डर हो। यो व्याख्या गर्न पनि राम्रो छ कि त्यहाँ भविष्यवाणीहरू छन् जुन पहिले नै आइपुगेको छ र यो सत्य आउन पर्छ। त्यो लिपि वा सिमुलेसनको स्रोत कोड हो। यदि हामी मान्दछौं कि यो बहु-सिमुलेशन अनुकरण हो, त्यसपछि समकक्ष अवलोकन आवश्यक हुन्छ सबै सहभागीहरूका लागि (माउन्ट एवरेस्ट सबैको लागि एउटै स्थानमा हुनुपर्छ)। यो क्वांटम भौतिकीबाट क्वांटम एव्यागमेंट द्वारा व्याख्या गरिएको छ र हामी यो आधारभूत सिद्धान्तलाई पनि फेला पार्छौं गुगलको क्लाउड एंकर प्रविधि सिमुलेशनका लागि यसको प्लेटफार्ममा (वृद्धि भएको वास्तविकता)। त्यसैले त्यहाँ थुप्रै संकेतहरू छन् कि हामी म्याट्रिक्स जस्तो वास्तविकतामा बाँच्न सक्छौं र यो बहु-खेलाडी खेल हो। त्यसैले तपाईं सक्नुहुन्छ of निष्कर्षमा आउनुहोस् कि तपाइँ आफ्नो विश्वासको आधारमा तपाईंको धर्मको लिपिको पालन गर्न जारी राख्नुपर्छ of तपाईं एक धेरै आकर्षक निष्कर्षमा आउन सक्नुहुन्छ।
भगवान को परिभाषा हो: भगवान अनुकरण को बिल्डर हो
त्यसपछि त्यो राम्रै निष्कर्षमा के हो? यसको लागि तपाईं साँच्चै पहिले अनुकरणको बारेमा मेरो लेख श्रृंखला पढ्नु पर्छ। यदि तपाइँ वास्तवमा हेर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने यो उचित अनुशंसा हो कि हामी सिमुलेसनमा बस्छौं, त्यसोभए तपाइँ पनि एक सिमुलेशनलाई सधै निःशुल्क छनौटको आदर गर्नुपर्दछ भनेर बुझ्न सक्दछ। तपाईं चाहानुहुन्छस्वतन्त्र इच्छाको व्यवस्था'यो कल गर्न सक्छ, किनकि निःशुल्क बिना कुनै कार्यक्रम अनुकार छैन, तर यो वास्तवमा एक प्रकारको चलचित्र हो जुन परिणाम पहिले नै निश्चित छ। तथापि, सिमुलेसनको सार यो हो कि तपाइँले खेलाडीलाई चुनौती दिन्छन् र खेल खेल्न कसरी राम्रो तरिकाले परीक्षण गर्न चाहानुहुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंले विमान बनाउन उडान र ओटोप्लिटमा उडान गर्नको लागि उडान सिम्युलेटर निर्माण गर्नुहुन्न, तपाईंले यसलाई पायलट परीक्षण गर्न निर्माण गर्नुभयो। बहु-खेलाडी सिमुलेसनमा तपाइँ कसरी अध्ययन गर्न चाहानुहुन्छ कसरी खेलाडीहरूले व्यक्तिगत रूपमा व्यवहार गर्दछ र सामूहिक रूपमा व्यवहार गर्दछ र कुन छनौट गर्ने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा बनाउनेछन्। तथापि, तपाईले केहि निश्चित लिपिको पालना गर्ने अनुकारमा गैर-खेलाडी क्यारेक्टरहरू राख्न सक्नुहुनेछ र स्क्रिप्ट पछ्याउनका लागि खेलाडीहरूलाई खेलाडीलाई समेट्न प्रयास गर्नुहोस्। के हामी सम्भवतः विश्व राजनैतिक र धार्मिक नेताहरूको भूमिका चिन्न सक्छौं? हो, जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ।
के यदि सिमुलेशनको बिल्डरको आशा छ कि खेलाडीहरू स्वेच्छाले एक निश्चित अन्त लक्ष्यलाई परास्त गर्छन्? त्यसपछि उसले महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा खेलमा गैर खेलाडी क्यारेक्टरहरू राख्नुपर्छ र निश्चित गर्नुहोस् कि खेलाडीहरूले स्क्रिप्ट खेल नगर्ने अभियोगका नियमहरू (जसमा उनले खेलमा राखे) को कम अंकहरू कमाउँछन्। खेलमा। सिमुलेशनको बिल्डरले यो नियमको अनुसार खेल खेल्न नमिल्ने बनाउँछ। के हुन सक्छ कि उनले एक निश्चित परिणाम प्राप्त गर्न चाहान्छ कि त्यो नि: शुल्क कानून को उल्लङ्घन बिना उहाँलाई अनुकूल छ? मानौं हामी राम्रो हो teaser movie यो सिमुलेशनको लागि प्रलोभन गरिएको छ, तर केवल सिमुलेशन भित्रको खोजमा आउँछ कि यो सबै भन्दा कम रमाइलो र मनोरञ्जन हो; कि हामी बिरामी पाउन सक्छौं, युद्धमा जानुहोस्, काम गर्नु पर्छ, जारी राख्न र यति? हामी खेल खेल खेल्न सक्छ, किनकी हामीले यसलाई खेल खेल्न एक सम्झौता हस्ताक्षर गरेका छौं। यद्यपि, यदि सिमुलेशनको बिल्डरले हामीलाई संरचित गरेको छ र अझै पनि हामीलाई सिमुलेशन भित्र स्वेच्छाले सेवा पुर्याउँछ भने, त्यसपछि उसले अझै पनि निःशुल्क इच्छाको आदर गर्छ, तर हामी सतर्क रहनु पर्छ र अचम्म लाग्न सक्छ कि कुनै खराब मनसाय छैन छ।
मेरो विचारमा, यस सिमुलेशनलाई निश्चित दिशामा (बिल्डर-संचालित, गैर-प्लेयर क्यारेक्टर) द्वारा अवतरण गरिएको छ। तिनीहरू लिपिमा आधारित धार्मिक र राजनीतिक प्रक्रियाहरू मार्फत निश्चित दिशामा लिपिहरू चलाउन प्रयास गर्दछ (किनभने डुङ्गाले एक इच्छित दिशामा प्रत्यक्ष सिधा दिन्छ)। मेरो विचारमा, अन्तिम लक्ष्य बिल्डरको AI प्रणालीसँग विलयमा आत्मसमर्पण गर्न हो; अन्य शब्दहरुमा: अनुकार मा गहिरो डूब। धर्ममा हामी यो 'अनन्त जीवन' मा पाउँछौँ। Transhumanism मा (Google को सीईओ रे कुरवेविल हेर्नुहोस्) यो एकलता भनिन्छ। एक विरोधी वा मसीह (जस्तै) क्लाउडको मसीह-जस्तो व्यक्तिको आगमन प्राप्त गर्न सजिलो छ। यस तरिकाले, खेल बिल्डरले खेलमा सजिलै संग अवतार देखा पर्न सक्छ। यदि तपाईंले त्यो परिप्रेक्ष्यबाट सबै हेर्न शुरु गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यो वास्तवमा हाइपर-यथार्थवादी सोनी प्लेस्टेशन खेलको एक प्रकार हो भन्ने कुरा सुरू गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ कुरा, भावना, विचार र तपाईंले बुझ्नु भएको सबै कुरा तपाईंको आत्मा (पर्यवेक्षक / खेलाडी) द्वारा बुझिएको छ। खेल (तपाईंको शरीर) मा तपाईंको अवतार। यो अत्यावश्यक छ कि तपाईंले यो गर्नुभयो 'डबल स्लिट्स' प्रयोग राम्रो बुझ्दछ।
यसैले यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँ आफ्नो धर्मको ईश्वरलाई समर्पण गरेर अनन्त जीवन जित्न सक्नुहुनेछ, तपाईले2मा आवश्यक गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं संग सुरू गर्न, तपाइँ सधैँ बाँच्नुहुन्छ र तपाईं बहुविध अनुकरणमा एक खेलाडी हुनुहुन्छ। र दुईवटा बिन्दु तपाईं स्क्रिप्ट राख्ने सेवामा हुनुहुन्छ जुन तपाईलाई यस सिमुलेशनको बिल्डरसँग पनि थप निश्चित रूपमा जोड्नको उद्देश्य छ। अब तपाईं यसो भन्न सक्नुहुन्छ:हो, तर मेरो भगवान मात्र राम्रो मनसाय छ!"ठीक छ, त्यसपछि त्यो कि हत्या र हारे, रोग, पैसा र दासत्वको लागि काम गर्नु आवश्यक छैन। तपाईं एक दोहोर्यात्मक प्रणालीलाई सकारात्मक र नकारात्मक पक्षमा समर्पण गर्नुहुन्छ। यस सिमुलेशनको बिल्डरसँग स्पष्ट इराक छ; अर्थात् ती व्यक्तिहरू जहाँ हामी आत्मसमर्पण गर्दछौं र बढ्दो निर्भर हुन्छौं। उनले लिपि र यो लिपिको निर्देशन चालकहरूको माध्यमबाट यो प्रयास गर्न खोज्छ; शीर्ष पदहरुमा उनको अनुकरण मा (उनको द्वारा नियंत्रित) उनको द्वारा राखे अवतार। जो कोहीले प्रबंधन पट्टि मार्फत यी अवतारहरूको सेवामा राख्छन् र सबै ग्रेडहरू तल दास स्क्रिप्टको पूर्तिमा योगदान गर्दछ। यसैले स्क्रिप्ट नतिजा नगर्ने एकमात्र तरिका नतिजा छ कि सिमुलेटर बिल्डर स्क्रिप्टमा काम गर्न रोक्न हो। पढ्नुहोस् यहाँ जारी राख्नुहोस् तपाईं कसरी गर्न सक्नुहुन्छ।
स्रोत लिङ्क सूची: jw.org
ट्याग: विरोधी-क्रिस्ट, क्रिस्टेंडम, Dajjal, अनन्त, विशेष, विश्वास, धार्मिक विश्वास, ईसा, इस्लाम, येशू, जीवन, भविष्यवाणीहरू, धर्म, अनुकरण, singularity
17 जून 2019 मा 20: 47
डेभीड आईकेले एक पटक यस्तो वर्णन गरे:
ती मानिसहरूसँग निश्चित विश्वास छ कि 99,9 प्रतिशतका घटनाहरूमा आउँछ किनभने तिनीहरूका आमाबाबु र उनीहरूको वातावरण / संस्कृतिले विश्वास गरेको थियो।
किनकि उनीहरूले सबै धर्महरूको तुलना गरेका थिए र यसैले निष्कर्ष निकाले जुन "सर्वोत्तम" धर्म हो।
यसबाहेक, म पनि विश्वास गर्दछु किनभने मानिसहरूले भविष्यवाणी गरेका छन् कि भविष्यवाणी पूरा भइरहेको छ, यो पनि हुन्छ र पुष्टि गरिएको छ।
आकर्षणको एक प्रकार भन्नुहोस् (विचारहरू / विश्वासहरूले वास्तविकता सिर्जना गर्दछ)।
17 जून 2019 मा 23: 24
Insightful article, I have always said that this isaself-fulfilling script,aprogramming that is faithful। लुसिफर, यद्यपि मलाई केहि गर्न पनि छैन, म छनौटहरू प्रस्तुत गर्दछु र आत्मा झूटो रोशनीमा मक्खन जस्तै आउँछ।
(वा एक राय वा भविष्यवाणी) सही साबित गर्न बाध्य वा यसको व्यवहार व्यक्त गर्दा व्यवहारको परिणामको रूपमा साँचो आउन बाध्य छ।
बिग्रेको चीजको आशाले आत्म-पूर्ण भविष्यवाणी बन्न सक्छ
केवल सही उत्तर खेल्न को लागी छैन 🙂 # अपवाद
23 जून 2019 मा 15: 04
idd तपाईं पशु (डर) को खाने को आवश्यकता छैन, अर्को उदाहरण को कसरी सामान्य संदिग्ध मास्टर मास्टर स्क्रिप्ट को प्रतिनिधि मान्छे को खेल को रूप मा ..
18 जून 2019 मा 01: 15
त्यो कसरी सबै मार्टिन हो!
यदि यो सबै सजिलो भएको थियो भने त्यहाँ त्यहाँ कुनै बिन्दु छैन।
डैनीसँग पनि सहमत हुनुहोस्, तपाइँ आफ्नो जीवनको पहिलो7वर्षको लागि प्रोग्रामिंग गरिनेछ। यदि तपाइँ यसबाट हटाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफैलाई पुन: प्रयास गर्नु पर्छ। यदि तपाईं आफ्नो विश्वसनीय बक्समा बस्नुहुन्छ भने यसले काम गर्दैन।
यदि मानिसहरू वा समूहहरू सबैसँग एउटै स्क्रिप्टमा विश्वास गर्छन् भने, यो वास्तवमा हुनेछ।
म पनि यसमा विश्वास गर्दछु, तर म यो ग्रहमा अनन्तताको लागि रहन सक्दिन।
म मेरो मूलमा डर / मृत्युको माध्यममा फर्कनेछु।
18 जून 2019 मा 11: 34
पछाडिबाट पछाडी पछाडिबाट पछाडी पस्ने र पछाडीको चिसो पानीको बिरोधको बिरोधमा अनुहारमा रगत पिउने गरिन्छ। र विश्वास "(वा पुरानो परिचित भावना संग रहन सजिलो छ) अनुमति छैन।
म मेरो लेखमा धेरै समय बिताउँछु र फेरी स्न्याकरहरूको प्रतिक्रिया नगर्ने।
19 जून 2019 मा 05: 26
यो एक शर्मिला हो किनकि सबै किसिमका प्रतिक्रियाहरु अक्सर प्रायः एक राम्रो विचार दिन्छ जहाँ मान्छे लेखिएको लेखमा छन्। तिनीहरू तपाईंको लेखको दर्पण जस्तो छन्। सम्पूर्ण लेख समावेश गर्ने विचारहरूमा मात्र पास पारेर, मिरर प्रायः ढिलो हुन्छ। यसबाहेक, FEBO सँग धेरै राम्रो शनि बसेको कुकुरहरू छन्।
19 जून 2019 मा 10: 59
इन्टरनेटमा सबै प्रकारका प्रतिक्रियाहरू अब एक सही चित्र दिन सक्दैन, किनकि यो एजेन्डाका अनलाइन अभिभावकहरू भन्दा पूर्ण छ; ग्याफफेक फेसबुक प्रोफाइल ग्लोफफिक्स सोशल सञ्जालका साथ लुकेको छ कि छैन वा छैन।
के तपाइँ टेलीग्राफ प्रचार लेख अन्तर्गत टिप्पणी छोड्न सक्नुहुन्छ? नहीं।
यदि मानिसहरूले मेरो लेखहरू राम्ररी पढ्न र दृढताको अध्ययन गर्न उचित प्रयास गर्दैनन् भने, म यस्ता प्रतिक्रियाहरू पारित गर्न दिँदैन। यो वेबसाइट कसले प्रबन्ध गर्दछ? तपाईं वा म?
18 जून 2019 मा 15: 55
राम्रो लेख। मलाई आश्चर्य छ कि सबै पाठकहरूले तपाईको अर्थ के बुझ्दछन् भने। त्यो प्रश्न मात्र हो।
18 जून 2019 मा 22: 22
यसले हालको अवस्थाको धर्मको कमजोरीलाई स्पष्ट पार्छ। यदि तपाईं एक स्पष्ट कथाको साथ आउँनुहुन्छ भने, मानिसहरू माथि छान्नुहोस्, चाँडै फेरि मुक्तिदाता आउनुहोस् र यसलाई बाहिर बाहिर राख्नुहोस्।
तपाईले तिनीहरूलाई xandernieuws विश्वास फोरमलाई सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ
18 जून 2019 मा 22: 24
वा यो नग्न थियो, मलाई मेरो डचमा काम राख्नु पर्छ
19 जून 2019 मा 19: 19
ठीक छ, सुन्दर बोरो बयानहरू। यो भनिएको छ कि धेरै धेरै आफ्नो बुलबुले मा छन् र बाहिर आउन सक्दैन। तथापि, केही व्यक्तिहरू उनीहरूको बुलबुलेबाट छुटिएका छन् ... तर त्यसोभए उनीहरूले (र टिप्पणीमा) ("वास्तवमा एक बुलबुला" भनिने दृश्यको साथ स्वचालित रूपमा 'अन्त्य छैन') तर एक फरक प्रकारको बबल?)।
यो धर्मलाई कल गर्नुहोस्, वा यसलाई "कल बाहिरको सत्य" बोलाउनुहोस् ... तर
- तपाईं राम्रो यहाँ पछि गन्तव्यको लागि आफ्नो उत्कृष्ट अतिरिक्त गर्न छैन; त्यो जिज्ञासा धार्मिक विनाशहरूको ठेठ हो, र शक्तिको सोचलाई अझ बलियो बनाउँछ
- त्यहाँ कुनै स्वर्ग वा नरक छैन। होइन, त्यहाँ नयाँ / पुनर्स्थापित गरिएको पृथ्वी हुनेछ
- लेखको पछि दर्शनहरू हेर्नुहोस्, र त्यसपछि सम्भवतः यथासंभव रूपमा हेर्नुहोस् कि तपाइँलाई अझ विश्वास र धारणाहरू बनाउन को लागी आवश्यक छ ... बाइबल, वा ती दर्शनमा उल्लेख गरिएको?
- त्यहाँ आफैं बाहिर "विश्वव्यापी सत्य" हो, अन्ततः लुसिफर-इन-ए-सिमुलेसनद्वारा संचालित छैन।
- त्यहाँ एक ईश्वर हो जुन जसले युगको योजना बनाएको छ।
- अनुवाद र संकलन र अल्पसंख्यकहरुमा धेरै प्रदर्शन योग्य त्रुटिहरूको बावजुद तपाईं पवित्र पुस्तकहरु मध्ये एक मा जान सक्नुहुन्छ कि हामी अब5ईर को मध्यमा छौं।2eras तल निर्माण र मरम्मतको लागि हो !!
- त्यसैले तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि "क्रोधित ईन" को लागि, "अदृश्य व्यक्ति" ले लिपिमा लेख्नुभयो र भरायो? र यदि यो सिमुलेशन हो भने, त्यहाँ नियन्त्रण स्टिकको नियन्त्रणमा प्राणीहरू जस्तै "मानव-प्रकार" हुनुपर्छ। यस परिदृश्यमा कति "विश्वासहरू" छन्
- नहीं, भगवान को इरादा, राम्रो र बुद्ध दुवै यस ईन मा आफ्नो भूमिका छ ... र एक उद्देश्य संग।
सबै कुरा अध्ययन गर्न, "अन्वेषण" लाई हटाउन, "निष्कर्ष" मा मैले निष्कर्षमा आउँछ, उल्लेख गरिएको "विभिन्न प्रकारहरू" (यसको पनि शुरुआती अंक मार्टिन) को तुलनामा, त्यहाँ एक भगवानको सत्यको लागि हो जुन त्यस पछि एक योजना अघि पूर्ण थियो त्यसो भए उनीहरु आफुले आफुलाई अलिकति माया गर्दछन् र आफुले आफुलाई माया गर्दछन्। त्यसो भए उनीहरु संगै बस्छन्। ...., कम धारणा वा विश्वास अन्य सबै प्रकारका तुलनामा आवश्यक छ जुन बाइबिलमा आधारित छैन।
यसैले म तपाईंको वरपर प्रश्न सोध्छु: के हुन सक्छ कि त्यहाँ एक सत्य हो (एक ईश्वर) जसले मान्छेलाई आफ्नो योजना / लिपिको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छ? त्यसोभए एक सत्य (एक मानक) जुन आफैलाई भन्दा बाहिर छ र बाहिर छ? ईश्वर सत्यले आफ्नो छविमा अझ राम्रोको लागि सबैलाई पुनर्स्थापित गर्नेछ?
अथवा तपाईसँग 100,0% निर्णायक तथ्यहरू छन् कि कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि घटना हुन सक्छ कि?
19 जून 2019 मा 20: 24
त्यो नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी नयाँ सिमुलेशन (यो सिमुलेशन भित्र) हो जुन यस सिमुलेशनको बिल्डर (लुसिफर) हामीलाई आकर्षित गर्न चाहन्छ।
त्यहाँ कुनै सिद्धान्त छैन। क्वांटम फिजिक्स प्रयोगहरू देखाउँछ कि हामी अनुकारमा बस्छौं। त्यो पनि व्याख्या वा विश्वासको कुरा होइन।
तर तपाईं केवल परमेश्वर र येशूमा हुनुहुन्छ। किन? किनकि तपाईं डराउँछन् कि तपाईंले नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीलाई सम्झाउनुहुनेछ? राम्रो तरिकाले म भन्न चाहन्छु: रे कुज्जवल, एलोन मुस्क र सबै प्यानमा सामेल हुनुहोस् जसले हामीलाई एकलतामा पुर्याउँछ। त्यो नयाँ स्वर्ग र त्यस नयाँ प्रकृति एकताबद्धता ("अनुकरण" "नयाँ जीवन" को प्रतिज्ञा हुन्)।
20 जून 2019 मा 06: 49
मार्टिनको जवाफको लागि धन्यवाद।
यदि तपाईं आफैलाई ("मेरो सिन्धुपाल्चोक" जस्तो भनिन्छ भने) "यो सिमुलेशन" बाट तपाईं डिभेट गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं अर्को अनुकरणमा जानुहुन्छ, जस्तो कि तपाईंले संकेत गर्नुहुन्छ (नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी प्रस्तुत गरिएको थियो)। के त्यस सिमुलेशनको लूसिफेरियन प्रशासकहरू एक पटक मर्नेछैनन्? वा तिनीहरूसँग राम्रो उत्तराधिकारी छन्? र "सचेतना" मेरो जस्तै एक दिन मर्नुहुन्छ? अथवा अर्को प्रक्रिया मरिरहेको छ?
हाम्रो वर्तमान सिमुलेशन कस्तो छ?
फेरि फेरि त्यही प्रश्न: तपाईं किन हुनुहुन्छ, र तपाईंको लेखनको स्वीकार्यहरू (टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्) अझै पनि यसमा? के यो चाँडै होईन?
के "तपाईंको विकल्प" (जब तपाईं कदम चाल्नुहुन्छ) अनन्त? अथवा त्यहाँ के हुन्छ? के तपाईं मर्नुहुनेछ (एक पटक त्यहाँ पुग्नुहुन्छ)? वा त्यहाँ कुनै मुद्दा छैन मरिरहेको छ?
20 जून 2019 मा 09: 09
मलाई लाग्छ तपाईं मेरो अर्थ बुझ्नुहुन्छ।
सिमुलेन्स भित्र मर्दा प्लेस्टेशन खेलको स्क्रिनमा कुञ्जीपाटीको तुलनामा हुन सक्छ। आत्मा मर्दैन।
तपाईं एक पूर्व-प्रोग्राम गरिएको अवधारणामा फँसिएको जस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ एक राम्रो-स्वभावित भगवान हुनुपर्छ। तपाईं र म अब खेल्ने सिमुलेशनको बिल्डर लुसिफरको रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ (कम्तीमा हाम्रो अवतार स्थितिबाट)। त्यो केवल ऊपरी तह (शायद मूल) तहको मार्क जुकरबर्ग हुन सक्छ।
त्यस पछि कुन मूल तह बनाइएको प्रश्न र यो एक एकल देवता हो वा चाहे कि सबै प्रकारको सबै समावेशी डेटा स्ट्रिमबाट अनुकरण गर्न सकिन्छ जुन अनुकरण / अवतार स्थिति (खेल भित्र) बाट आउन सक्दैन। त्यसोभए तपाईं यो पुस्तकमा उपलब्ध पुस्तकहरू र जानकारी (जस्तै बाइबल) सँग गर्नुहुन्छ। कसले सेवा जानकारी सही छ भन्नुहुन्छ?
हामीले मात्र गर्न सक्नुहुने एकमात्र चीज हो कि हाम्रा परिस्थितिको विश्लेषणको लागी प्रयोगहरू। यी क्वांटम फिजिक्स प्रयोगहरू साबित हुन्छन् कि हामी एक सिमुलेशन रिलिजमा बस्छौं (दर्शकहरू / खेलाडीहरू)। फेरि: यो एक सिद्धान्त होइन, यो हाम्रो अस्तित्व को सार फेला पार्नका लागि एक कदम-दर परीक्षण र त्रुटि विधि हो।
19 जून 2019 मा 23: 39
येशूले किन बाइबलमा भन्नुहुन्छ "यस पृथ्वीमा आफ्नो घर निर्माण नगर्ने"? यो मात्र अर्थ हो कि यो एक अस्थायी स्थान हो। अन्य शब्दहरूमा, यस पृथ्वीमा यहाँ आफ्नो आत्मा गुमाउनु हुँदैन। उनी पनि भन्छिन् 'यो समाप्त भयो' र यो केवल समाप्त हुन्छ जब तपाईं लगभग परमेश्वरको नाममा एकअर्का पूरा गर्नुभयो। तपाईं केहि पनि यस साइटमा होइन र तपाईं अझै पनि येशूमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं येशू फर्कनु भएकोमा पृथ्वीमा आउनुभयो भने, तपाईंले सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईं येशू हुनुभयो। मार्टिन भन्छन् येशूका रूपमा र दुर्भाग्यवश तपाईं अझै धेरै मानिसहरू द्वारा चकित हुनुभएको छ।
यदि तपाईंले बाइबिलमा ख्रीष्टको ईमानदारीको लागि यी शब्दहरू आदानप्रदान गर्नुहुन्छ भने आफैमा अनौठो चेतना पनि तपाईं धेरै टाढा हुनुहुन्छ।
येशूले अरूलाई केसोचेको थिएनन् र कुन कुरामा तिनले जानकारी प्राप्त गरे। यसको अर्थ तपाईं यस संसार र यसको कानुनभन्दा माथि उठाउनुभयो। संसारले तपाईंलाई घृणा गर्नेछ किनभने यसको कुनै प्रभाव छैन।
येशू यस दोहोरो संसारको ईश्वरको विरुद्धमा जानुभएको थियो जसको अर्थ यो लुसिफर यस संसारको ईश्वरीय हो।
लुसिफर डेनिगड हो जसले आफैलाई अलग पारेको छ, यो हामीसँग छ कि हामी पनि अलग छ कि छैन।
20 जून 2019 मा 06: 58
यी सुन्दर चीजहरू तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको छ। मेरो अनुसार हाम्रो विचारले तपाईलाई भन्दा कम फरक छ।
तर म मार्टिनलाई पनि प्रतिक्रिया दिन्छु: तपाईं पनि "बैठ" हुनुहुन्छ। अलि अहिल्यै ठीक छ? येशू वा होइन, क्रिस-ईमानदारी वा होइन .... यस समयमा हामी अर्को चरणमा जान सक्दैनौं (अन्यथा तपाईं विवादास्पद सहानुभूति हुनेछौं कि तपाईंले आफैलाई यो आँसुमा "प्रचार गर" हामीलाई ...)।
कम्तीमा कम्तिमा तपाईं सृजनामा ​​"बुद्धिमान डिजाइन" देख्दा "नेता" छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ। खैर, यो धेरै अधिक सम्भव छ कि यो नेताले हामीलाई अर्को चरण (रिकभरीका चरणहरूमा) मा ल्याउनेछ।
और म Guppy को लागि के मतलब छ कि तपाईं सोच रहे हो: कुन परिदृश्य को तपाईंलाई अधिक विश्वास र धारणा को आवश्यकता छ?
यो सिमुलेशनमा बाँकीको लागि धन्यबाद ... ... कम्तिमा हामी यी विषयहरूमा विचारहरू बदल्न सक्छौं।
20 जून 2019 मा 10: 23
यदि तपाईंले मेरो लेख सही रूपमा पढ्नुभयो भने, यस सिमुलेशनमा खेल्दै तपाइँसँग यो सिमुलेशन खेल्ने अनुबंधमा हस्ताक्षर गरेको छ भने सहानुभूति संग केही गर्न को लागी छैन। यद्यपि, म यस सिमुलेशनको बिल्डरको अवतारको लागि निम्न अनुकार र पतनद्वारा डोऱ्याउन चाहँदैनन् (जस्तै अवतार यीशुको रूपमा) र निश्चित रूपमा केही सुन्दर पुस्तकहरू (जस्तै बाइबल) को अवतार द्वारा तयार नहोला यस अनुकरणको बिल्डर।
बिन्दु हो कि तपाईं सम्झनुहुन्छ कि तपाईं आफ्नो अवतार छैन, तर तपाईंको प्राण। यो क्वांटम भौतिकी प्रयोगहरूबाट स्पष्ट छ।
म बुझ्न सजिलो छ र येशूलाई पर्खन सजिलो छ र त्यसपछि नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको लागि आशा छ। राम्रो र? अनि त्यसपछि? त्यही त्रास देवताको दासत्वमा बस्न? यो नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीमा यो सबै समय के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईंको बगैंचालाई कसरी खानुपर्छ? वा येशू ख्रीष्टको सिंहासनमा शान्तिको सहस्राब्दी राज्यमा शासन गर्नुहुन्छ? कसले शासन गर्छ? त्यहाँ केही वंशानुहुन्छ (जस्तै कि ... "हाहा, म ठीक तरिकाले येशूको बाकी माथि शासन गर्न सक्नुहुन्छ")।
20 जून 2019 मा 10: 46
मलाई लाग्छ तपाईंले धेरै पटक पुन: पुनर्जन्म नगरे सम्म तपाईंलाई थाहा छ कि यो भ्रम हो। यो सबै सनसनीको बावजूद उपलब्ध सबै जानकारी संग पत्ता लगाउनको लागि आदर्श समय हो।
यो मार्टिन र म र धेरै अन्य को लागि अन्तिम दौर हो। यदि तपाईं शक्ति र प्रसिद्धि चाहनुहुन्छ भने तपाई यहाँ (सदाको लागि) रहन सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईलाई थाहा छैन भने यो भ्रम हो भने यो गहिरो गहिराई छैन।
तपाईं यहाँ सात मुहरहरू, सात चक्रहरू खोल्नका लागि लुईफर माथि उठ्नुभयो। यो तपाईं हरेक हप्ता नयाँ युग धर्म र योग संग बचत गर्न जाँदैछ। तपाईं बाकस बाहिर जाँदै र जानकारी कि एकत्रित गरेर यो बचत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। हामी यो हाम्रो जीवनमा सफल भएका छैनौं, किनकि हामी अझै पनि यहाँ छौं।
हामी सबै समय सिक्नका लागि, किनकि समय अवस्थित छैन।
यसबाहेक, हामीले एहसास गर्नु पर्छ कि हाम्रो अहंकार (हाम्रो अवतारबाट) यति ठूलो छ कि हामी साँच्चै यहाँ रहन चाहन्छौं।
मलाई लाग्छ कि तपाई साँच्चिकै जाने चाहानुहुन्छ भने मात्र जान सक्नुहुन्छ।
त्यो पहिले देखि नै एक प्रमुख चुनौती हो।
20 जून 2019 मा 11: 15
मार्टिन / गुप्पी, विभिन्न दृष्टिकोणका लागि धन्यबाद। म अहिले यो पार्क गर्न जाँदैछु।
मेरो विचारमा, तपाईंसँग अपर्याप्त जागरूकता छ कि तपाईंले पहिले नै आफैंलाई कसरी सिर्जना गर्नुपर्दछ र आफ्नो दृष्टिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ; केवल "भौतिकी प्रमाण" को टुक्रा सम्पूर्ण कहानी सही बनाउन पर्याप्त छैन।
तपाईं "सबै चीजहरूको पुनःप्राप्तिको सिद्धान्तको बारेमा यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ।"
यद्यपि म यस समय सबै केहि तयार छैन, म जान्छु कि मैले पालन गर्ने धेरै चीजहरु लाई पनि व्यावहारिक रूपमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, तपाईं बाइबलमा मुख्य रेखा धेरै धेरै कोणहरूबाट प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ (ग्रामीण माध्यम / लिपि-स्क्रिप्टको शुद्ध रूपको बारेमा स्वतन्त्र स्रोत / अन्य जाति आदिको हिस्टोरिगोग्राफी तुलना गर्नुहोस्)।
यो तपाईंको लागि राम्रो छ कि तपाइँको अन्तिम राउन्ड हो। मलाई थाहा छैन कि म तपाईंसँग भेट्नुभन्दा अघि धेरै गोलहरू हुनेछु। मेरो दृष्टिकोणबाट हामी निश्चित "एक भविष्य भविष्यमा" एक-अर्कालाई देख्न सक्छौं।
मार्टिन, तपाईंको अन्तिम प्रतिक्रिया केही हप्ता भएको छ ... (hoeing / tyranny आदि ...); कम्तिमा, म यो निष्कर्ष निकाल्छ कि यी समस्याहरू अध्ययन गर्न विकासको लागि कोठा छ।
एक राम्रो यात्रा साथ साथ !!
20 जून 2019 मा 11: 24
होइन, म तल जाँदैछु। म शान्तिको सहस्राब्दी राज्यको बाइबलीली भविष्यवाणीलाई उल्लेख गर्दछु।
यो शान्तिको सहस्राब्दी राज्यको भविष्यवाणी हो जसमा येशूले आफ्नो दुलही (अथवा सबै विश्वासीहरू, उहाँका चर्च, "चर्च", वा जुन जुन तपाईं यसलाई कल गर्न चाहानुहुन्छ) शासन गर्नुहुन्छ।
यसको अर्थ ख्रीष्टियनहरूले आफूलाई चुनेका मानिसहरूको रूपमा हेर्छन्। अहिले; म विश्वास गर्छु कि यो लिपिको पछ्याउने र ट्रान्समैनमेन्टिक चरणमा समाप्त हुन्छ जहाँ हरेक लुसिफर समर्थक (यहाँ येशू ख्रीष्टमा विश्वासी, लुसिफरको अवतार) नयाँ शरीर (एक नानकोट-निर्माण अवतार) पाउनेछ।
यद्यपि, त्यो सिर्फ सुरुवात हो। सम्पूर्ण सिमुलेशन परिवर्तन हुनेछ (नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी भविष्यवाणी)।
तपाईं मेरो विश्वासबाट मलाई बाट जाने को आवश्यकता छैन, तर म यो पाएको छ कि तपाईं (और धेरै अन्य) यो यति संलग्न छन्। "मुक्तिदाता माथिबाट आउँछ"। यो राम्रो हुनेछ यदि तपाईंले बुझ्नुभयो भने तपाईंको विश्वास एउटै अन्त-पटक लिपि पूरा गर्न आवश्यक दोहोरोवादको भाग हो (र निम्न कुरा सबै कुरा - जस्तै शान्तिको राज्य, आदि)। तपाईंसँग क्रूर ईश्वरमा एक धेरै अन्धा विश्वास छ भने, यदि आवश्यक भए, पाप क्षमा गर्न रगत देख्नै पर्छ। यो राम्रो थियो कि उसले आफ्नो बेटाको बलिदान गर्नेछ (सिमुलेशनमा अवतार); तर आओ। आफैलाई यो सरल बनाउनुहोस्। कति लामो समयसम्म मानिसहरूले त्यस कथामा टक्कर गर्छन्?
कुन भगवानले रक्त हेर्न चाहन्छ? आफ्नो ख्रीष्ट बबल बाहिर आउनु नडराऊ।
खराब कुरा भनेको धार्मिक विश्वासहरूले लिपि बनाए। यसैले म त्यसमा जोर जारी राख्छु।
20 जून 2019 मा 11: 58
मार्टिन, म तपाईंको विश्लेषणात्मक क्षमताहरूको आदर गर्दछु जसले तपाईंका लेखहरू पछाडि झूट दिन्छ। तर ईसाई धर्मको वरिपरि तपाईं ज्ञान भन्दा अगाडी नै ख्रीष्टियनहरूको "95%" प्रयोग गर्नुहुन्न। तर बाइबलमा धेरै "आधार" वास्तवमा फरक फरक छन्।
बस आफ्नो दृष्टि को बारे मा थोडा थोडा: जो Luciferianists संधै उनको साथ पुनर्जन्म? के तिनीहरू शासकको रूपमा आफ्नो भूमिकामा रहन्छन्?
र तपाईं आफ्नो 85e पछि कहाँ समाप्त गर्नुहुन्छ? र तपाईंको दैनिक खर्च त्यहाँ के छ?
20 जून 2019 मा 14: 07
अन्यथा वेबसाइटमा सुरू गर्नुहोस् जहाँ हामी तपाइँका रोचक दृष्टिकोणहरू पढ्न सक्छौं, तपाईं जाहिरा तरिकाले पट्टि पक्कै धेरै बुद्धि छ र यो हराएको हेर्न को लागि शर्म हुनेछ। म उत्सुक छु
20 जून 2019 मा 21: 45
तपाईंले सोध्नु भएको प्रश्न अजीब छैन, मैले आफैलाई सोधें। जवाफहरू प्राप्त गर्न सजिलो छैन र मैले बक्स बाहिर बाहिर सोचेँ जब मैले मात्र जवाफ पाएको छु।
तपाईं किन विश्वभरका नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति परिवारमा राख्न चाहन्छन्? यसको अतिरिक्त, तिनीहरूले रगत बनाए राख्छन् किनकि तिनीहरूको डीएनए यस संसारलाई चलाउन को लागी प्रोग्राम गरिएको छ।
हाम्रो डीएनए पनि मूलबाट विभाजनद्वारा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ।
यो दुनिया एक प्रतिलिपि हो र तपाईंको प्रश्न को उत्तर को उच्च स्तर मा के जवाफ दिनुहोस: त्यहि संसारहरु लाई विचार को माध्यम बाट बनाउन को लागी। तर यो उत्तरदायी हुन तपाईं पहिले सबै भन्दा कम स्तरमा उत्रनु पर्छ। यो संसारको ईश्वरीय जस्तै गरेको स्वार्थमा आफैलाई हराउने एकमात्र तरिका हो। उहाँले एक कारणको लागि यसो भन्छ "त्यहाँ केवल 1 भगवान हो र तपाईं मलाई अरू बाहेक कुनै अन्य प्रेमलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न।"
यस संसारका नेताहरूले यी गुणहरू पाएका छन् र साँच्चै विश्वास गर्छन् कि उनि मात्र हुन् जसले यस संसारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ र।
20 जून 2019 मा 15: 46
यदि तपाइँले पहिले नै यसलाई छलफल गर्नुभयो भने (वा सन्दर्भ) हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी "दृढताको अवधारणा" फिट हुन्छ? (जुन प्रायः आध्यात्मिक समुदायमा वितरित गरिन्छ)
त्यसैले सिमुलेशन सिद्धान्तमा, "मूल" भनिन्छ
एकता अवधारणामा यो मानिन्छ कि हरेक "ठूलो स्रोत" को भाग हो। र यसैले त्यहाँ वास्तवमा कुनै "मौलिक" होइन ..? सबै एक र सबै एक हो? के यो विश्वास छ कि लिपिमा प्रयोग गरी सबै 1 टोपी अन्तर्गत प्रयोग गर्न सकिन्छ।
म उत्सुक छु कि तपाईंले यो वर्णन गर्नुहुनेछ।
« अधिकतम समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान समझाईयो
अन्जा स्कापले 'जांच अनुरोध' मा छविहरू हेर्न सक्छन् र यसैले कुनै PsyOp? »
कुल भ्रमण: 13.108.970